थारुलाई न्यून पदक ! के थारुहरु मानपदवी पदक पाउन सक्षम छैनन् ? - Hamar Pahura
थारुलाई न्यून पदक ! के थारुहरु मानपदवी पदक पाउन सक्षम छैनन् ?
बिहिबार, आश्विन ०४, २०७५ १३:०९:१६
काठमाडौं, असोज ४ गते । चौथो संविधान दिवसको अवसरमा गृहमन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएकाहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट मानपदवी, पदक र अलङ्कार प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा तीनजना मात्र थारु पदवी प्राप्त गर्ने सूचीमा समेटिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रका गरी ५०७ जना मध्ये तीनजना थारुको नाम सूचीमा समेटिएको छ । मानपदवी पाउने जम्मा संख्या ५०७ को यो ०.५९ प्रतिशत मात्र हो ।
विभिन्न क्षेत्रका गरी ५०७ जना मध्ये तीनजना थारुको नाम सूचीमा समेटिएको छ । मानपदवी पाउने जम्मा संख्या ५०७ को यो ०.५९ प्रतिशत मात्र हो ।
प्रवल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) पदक पाउनेमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति ललितपुरमा कार्यरत प्रशिक्षक धनीराम चौधरी रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ७ का प्रमुखको कार्यालय धनगढीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी (चौथा) तर्फ भिखु चौधरीले जनसेवा श्री (पञ्चम श्रेणी) प्राप्त गरेका छन् ।
सोहीअनुसार कालीभक्ती गणका जमदार दानबहादुर चौधरीले शौर्य पदक प्राप्त गरेका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते सो पदकको सूची गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा वितरण गरिने मानपदवी, पदक र अलङ्कारबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सिफारिस गरिएका नाम काटिएको, पाउने व्यक्तिले प्राप्त नगरी चोर बाटोबाट योगदान नदिएकाहरुले पदक हात पारेको टिप्पणी पनि भएका छन् ।
उसो त थारु समुदायका केही व्यक्तिले संविधानको विरोधमा कालो दिवस मनाइरहेका छन् । केही थारुले संविधानको स्वागत गरेका छन् । यसकारण पनि थारु समुदायलाई मानपदवी, पदक र अलंकारमा कम छनौट गरिएको हुनसक्छ ।
यद्यपि विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिनेलाई त्यस्तो पदक, मानपदवी र अलंकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकाले त्यसको अवमूल्यन भने गरिनु राम्रो मानिदैन । मानपदवी, पदक बारेमा थारु समुदायका संघ संस्था तथा अगुवाहरुको खासै चासो पनि नदेखिएको थारु कल्याणकारिणीसभाका एक सदस्यले बताए ।